Chọpụta Onye Dị Mma VPN Onye Na-enye Ihe | ECommerce ozi ọma
Chọpụta ezigbo VPN onye na-eweta gị
ECommerce ozi ọma | | Nkuzi na akuru
Iji VPN iji zoo kọmputa gị Mgbe ị na-abanye n’ Internetntanet, ọ bụghị naanị na ọ na-enyekwu gị nchebe, kamakwa ọ na-enyere gị aka nweta geo-referenced ọdịnaya.
Imirikiti ndị mmadụ amaghị banyere atụmatụ dị iche na otu VPN na nke ọzọ. Ọ dị oke mkpa ịmata atụmatụ ndị a, ebe ha nwere ike imetụta nzuzo gị, nchekwa gị, yana ogo ọdịnaya ịntanetị na-enweta.
1 Gini mere iji jiri VPN?
1.1 Nweta otu ụlọ ọrụ na netwọk ka ị na-ejegharị
1.2 Ejikwa netwọk ụlọ gị mgbe ị na-agagharị
1.3 Kpuchie àgwà nchọgharị gị site na LAN na ISP gị
1.4 Njikọ na nyiwe nke na-egbochi site na mgbochi mba
1.5 Budata faịlụ
2 Kedu ihe ị kwesịrị icheta mgbe ị na-ahọrọ onye na-eweta VPN gị?
2.2 Netiwoki sava
2.5 Ozo ndi ozo
Gini mere iji jiri VPN?
VPN bụ ihe eji arụ ọrụ nke ọma, mana enwere ike iji ya maka ọtụtụ ebumnuche.
Nweta otu ụlọ ọrụ na netwọk ka ị na-ejegharị
Ndị VPN na-ejikarị ndị njem azụmaahịa eme ihe nyochaa netwọk ụlọ ọrụ gị, gụnyere ọrụ LAN niile, mgbe ị nọ n'okporo ụzọ. Enweghị ike ịnweta ọrụ mpaghara n'ụzọ zuru ezu na ịntanetị, nke na-eme ka nchebe dịkwuo elu.
Ejikwa netwọk ụlọ gị mgbe ị na-agagharị
Younwere ike melite VPN nke gị iji nweta netwọkụ nke gị ka ị na-aga. Nke a na-enyere gị aka ịnweta Windows desktọọpụ dịpụrụ adịpụ na thentanetị, iji kekọrịta faịlụ mpaghara na igwu egwu na asntanetị dị ka a ga - asị na ị nọ na otu netwọk mpaghara (LAN).
Kpuchie àgwà nchọgharị gị site na LAN na ISP gị
Ọ bụrụ na ị nwere njikọ Wi-Fi ọha na eze, omume nchọgharị gị na ebe nrụọrụ weebụ na-abụghị HTTP ga-edo onye ọ bụla anya ma ọ bụrụ na ịmara otu esi eso ha. Kwesịrị ijikọ na netwọk onwe gị (VPN) ma ọ bụrụ na ịchọrọ kpuchie àgwà nchọgharị gị iji nwee ntakịrị aha.
Naanị otu njikọ njikọ VPN nwere ike iji na netwọkụ mpaghara. A na-agagharị okporo ụzọ ndị ọzọ niile site na njikọ VPN. Ọ bụ ezie na enwere ike iji nke a iji zere nyochaa njikọ ISP gị, buru n'uche na ndị na-eweta VPN nwere ike ịchọrọ ịbanye okporo ụzọ na saịtị gị.
Njikọ na nyiwe nke na-egbochi site na mgbochi mba
Ọ bụrụ n’ịnwale nweta akaụntụ Netflix gị mgbe ị nọ mba ọzọ, ma ọ bụ ihe ntanetị ịntanetị dị ka Netflix, Pandora, na Hulu, ị nwere ike ịnweta ihe onwunwe ndị a machibidoro mpaghara mgbe ị jikọtara VPN na sava ebe ahụ.
Ee, ka anyị chee ya ihu, ọtụtụ ndị na-eji VPN njikọ na budata faịlụ site na BitTorrent. Nke a ga-aba uru, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ibudata iyi niile ziri ezi.
Ọ bụrụ na onye na-ahụ maka ịntanetị na-egbochi BitTorrent ma mee ya nwayọ nwayọ, ịnwere ike iji BitTorrent site na VPN maka ọsọ ọsọ. Otu ihe a metụtara ụdị okporo ụzọ ndị ọzọ nke ISP gị nwere ike igbochi (belụsọ na ha gbochiri okporo ụzọ nke VPN).
Kedu ihe ị kwesịrị icheta mgbe ị na-ahọrọ onye na-eweta VPN gị?
Mkpebi ịhọrọ otu ihe nkesa ma ọ bụ ọzọ nwere ike ịdị mgbagwoju anya. Agbanyeghị, ọ bụrụ na iburu ihe ole na ole n'uche, ọrụ ahụ ga-adị mfe.
Kedu ka ọkwa nchekwa nke VPN nyere si dị mma? Kwesịrị lelee ogbugba ndu nzuzo ma nyochaa nkwụsi ike nke njikọ VPN. Na Surfshark VPN dịka ọmụmaatụ, ọ na-enye gị nnukwu nchekwa dị elu.
Nwere ike ịchọ VPN na sava na otu mba ma ọ bụ mpaghara. Na ọnọdụ a, ọ dị mkpa ka ị mara na e nwere ọnụ ọgụgụ dị mma nke sava na onye na-eweta VPN. E wezụga na ọnọdụ, na- ọ dị mkpa ịmata ibu nke sava VPN. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkekọrịta ihe nkesa na ọtụtụ puku mmadụ, nke a nwere ike imetụta ọsọ njikọ gị.
Ga-ahụ otu ọ dị mfe iji VPN, ma ọ bụrụ na ọ dabara nke ọma na ọtụtụ kọmputa. Ọ dị mkpa nye ọtụtụ ndị ọrụ na VPN bụ mfe iji nakwa na ngwa ahụ bụ transparente. I kwesịkwara ijide n'aka na ha nwere ezigbo ndị ahịa ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla.
Onye na-eweta VPN ga-ejikwa sava gị nke ọma ma gbasaa netwọk sava ka ọnụọgụ ndị debanyere aha na-eto.
Kedu ihe na-eme ọsọ ọsọ ịntanetị anyị mgbe anyị jikọọ na sava VPN? Na mkpokọta, iji VPN nwere mmetụta dị njọ na ọsọ njikọ anyị.
Ọ bụghị na mberede mgbe okporo ụzọ ezoro ezo ma na-aga VPN. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ọdịiche dị n'etiti ndị na - enye VPN ihe doro anya ma ọ bụ na - akpasu iwe enweghị ọsọ a. N'ihe banyere Surfshark, ọ na-enye gị nnukwu ọsọ na njikọ gị. N’ihi ya, ị chọghị ichegbu onwe gị.
Ozo ndi ozo
I gha hu ihe ndi ozo ndi ozo nke VPN nyere gi. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọ na-enyere gị aka ile Netflix na mba ọ bụla echepụtara, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịnwere ike iji ya budata iyi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Nkuzi na akuru » Chọpụta ezigbo VPN onye na-eweta gị
Kedu ihe bụ WooCommerce
Gini bu ahia ahia dijital?